Umehluko we-Semalt: Ngaphezulu kwe-Google nangaphezulu
Kungaba nzima ukutshela abasebenza kwezentengiso ngaphandle.
Njengoba kuvela, bonke bakulungele ukuzithengisa. Lapho bonke benza izimangalo ezifanayo ezimangazayo - thola ibhizinisi lakho phambi kwamehlo amaningi, bathengisa ukuthengisa, bandakanya inkampani yakho - uyazi kanjani ukuthi uzosebenzisa ini nokuthi unganaki?
Ukuqonda ukuthi ungahlukanisa kanjani ukolweni kumakhoba, ake sibheke enhlanganweni egcwele izitolo ezenza izinto ngokufanele: Semalt.
ISemalt iyisevisi ye-SEO neyentengiso eyasungulwa ngonyaka ka-2013. Le nkampani iyinhlangano ejikeleza abagcwele, okusho ukuthi ingaletha umkhankaso ophelele wokumaketha ukusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Inethalenta elithile emikhakheni ye-SEO ne-analytics, lapho inikezela ngezinsizakalo ezihlukile.
Eminyakeni selokhu yasungulwa, uSemalt ukhule waba iqembu lezomnotho lomhlaba jikelele. Njengoba esehlaziye amasayithi acishe abe yizigidi eziyi-1.5 futhi aziqhayise ngabasebenzisi abangaphezu kuka-600,000, uSemalt usheshe waba ngumholi ku-SEO nasendaweni yokukhangisa futhi akakhombisi zimpawu zokuthi wehlise ijubane. Le nhlangano iqhutshwa iqembu elinethalente labadali nabachwepheshe, ongahlangana nabo lapha!
Ungase uthi, "Konke kuhamba kahle, kepha ngazi kanjani ukuthi uSemalt ungifanele isikhathi nemali yami?" Ukuphendula lowo mbuzo kuzodingeka sihlolisise izinsiza zawo.
Ngabe i-ejensi inikela ngani mayelana nezinsizakalo ze-SEO? Kufanele uqaphele ngokushesha noma iyiphi inkampani yezentengiso ethembisa umhlaba, noma ungacaci kahle ukuthi izinsiza zabo ze-SEO zisebenza kanjani, ngoba lokhu kuyisibonakaliso sokuthi bazosebenzisa ngokungaphansi noma ukuthi bakopela uhlelo ukuze banikeze imiphumela esheshayo kodwa ehlala isikhashana. .
Endabeni kaSemalt, inkampani inikezela ngezinsizakalo ezintathu ezihlukile ze-SEO: I-AutoSEO, i-FullSEO kanye ne-E-Commerce SEO, futhi inemininingwane eminingi yokusebenza kwangaphakathi ngakunye.
Iphelele kunoma ngubani ofuna ukubopha uzwane wakhe ezweni le-SEO, i-AutoSEO inikeza abanikazi bebhizinisi isingeniso esisheshayo, esilula nesisebenzayo sokucinga ngenjini. It:
Ihlaziya iwebhusayithi yakho
Ukukhetha amagama okhiye
Ihambisa imibiko ejwayelekile
Futhi kwenza konke lokhu okuncane njengoku- $ 0.99 !
Kulabo abafuna ukubona imiphumela yangempela nehlala isikhathi eside, akukho lutho oluqhathaniswa nokuthintwa komuntu, futhi yilokho ngqo okuhlinzekwa yiphakethe likaSemalt's FullSEO. Thola ukuhlaziya okujulile, ukusebenzisa kahle kanye nokusekelwa okuvela eqenjini lesazi elikhulise ukugcwala kwewebhusayithi emazweni e-177 ahlukahlukene. Uma ufuna impumelelo yenjini yokusesha yangempela, ufuna i-FullSEO.
Amawebhusayithi e-commerce anikeza inselelo ehluke kakhulu kumawebhusayithi angathengisi ngenkuthalo online. Isinikezeli se-E-Commerce SEO sikaSemalt senzelwe ukuphatha imibuzo eyingqayizivele ebuzwa ngokuthengisa izimpahla nezinsizakalo nge-intanethi, ngokubhekisisa imibuzo yokushintshana namagama angukhiye omvamisa ku-niche yakho ethize, lapho uthola amakhasimende athile owafunayo.
Ulwazi ngamandla. Ungashaya izimbangi zakho kuphela bese uhola imakethe uma uqonda izimbangi zakho nemakethe. I-ejensi egcwele ngokuphelele kufanele inikeze insiza ephelele yokuhlaziya enikeza inkampani yakho lonke ulwazi oludingayo ukuze luphumelele.
I-Semalt Analytics ikuvumela ukuthi wakhe isithombe esiphelele sesikhundla sakho semakethe. It:
Usebenza kanjani wena nalabo oncintisana nabo
Qokomisa ukuthambekela kwemakethe okuzokusiza ukuthi uye phambili
Khiqiza imininingwane ezokusiza ukuthi uthole izimakethe ezintsha.
Kwakha ipulatifomu yolwazi lapho ungaqala khona isu eliphelele lebhizinisi.
Ngemuva kokuthi uqinisekise umlando wesikhungo sokumaketha, uqiniseke ukuthi ugcwele ngokugcwele, futhi uhlole ukuthi banikela ngezinsizakalo ezintsha, ezisezingeni elifanele, ezifakazelwe ukuthi inkampani eholayo kufanele, sekuyisikhathi sokukuyisa esixukwini. Ayikho enye indlela engcono yokubheka ikhwalithi yozakwethu ongafuna ukumaketha kunokuzwa kulabo asebenze nabo ngaphambili.
Izifundo zamacala ziyindlela enhle yokubheka ukuthi i-ejensi isebenza kanjani, nokuthi yini ongayilindela uma uzosebenzisa izinsiza zazo. I-Semalt ifaka inqwaba yezifundo zamacala kuwebhusayithi yayo, ikunikeze amazwana omabili emisebenzini yabo nasemiphumeleni yabo.
Kunendlela elula yokubheka ukuba semthethweni kwe-ejensi: gxuma ku-inthanethi futhi ubone ukuthi lithini iwebhusayithi emhlabeni jikelele. Ngenxa yenkululeko yolwazi olunikezwe yi-inthanethi, manje sekuyinto engenakwenzeka ukuthi inkampani ifihle iqiniso lokuthi bathatha izinqamuleli noma cha bahambise izithembiso.
Bheka ukubuyekezwa kwe-ejensi yakwa-Google ne-Facebook. Uma, njengoSemalt, benesibalo sokubuyekezwa kweGoogle esingu- 4,5 / 5 nesibalo sokubuyekezwa ku-Facebook sika- 4.9 / 5 (kanye nabalandeli abangu-170,000) , ungaqiniseka ukuthi bayindlela enhle. Semalt inikeza kuze amakhulu ebhaliwe kanye kobufakazi isiqophi esizeni salo, esiwulwazi usizo labo abangase babe abathengi ukuthola ukuqonda kahle ukuthi inkampani kufana emsebenzini nge.
Into elula engasiza ukuhlukanisa ama-ejensi aphambili kokuphumelelayo ukuphindeka kabusha. Ufuna ukwazi ukuthi usebenzelana nabantu bangempela abazokuqonda, futhi abazokujabulisa ukusebenza nabo. Uma i-ejensi ikhombisa uhlangothi lwayo olumnandi, lokho kuyisibonakaliso esihle.
Thatha uSemalt's osehhovisi mascot, Turbo the Turtle, njengesibonelo. Waba yingxenye yeqembu likaSemalt lapho sebefudukele ehhovisi elisha ngonyaka ka-2014, lapho umqashi owayemqeshile. Manje uthokozela impilo e-aquarium enkulu, futhi unephrofayli lakhe lomsebenzi (ungumuntu oxoxisana naye ngokuqasha) kwiwebhusayithi!
Konke, uSemalt uhlinzeka ngemininingwane ephelele yokuthi yini okufanele ayibheke ku-SEO egcwele ngokuphelele kanye ne-ejenti yezokumaketha. Inikeza izinsiza ezigcwele zamasu wokuqamba, ibukezwa kahle, inerekhodi lokufakazelwa, futhi inikezela yonke le mivuzo ngentengo enhle.
Ngaphezu kwalokho, uma usebenze nezinkampani cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni, ungaqiniseka ukuthi uSemalt ukhuluma ulimi lwakho lwebele! Iqembu leSemalt lisazi kahle isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiTurkey, isi-Ukraine, isiRussia nezinye izilimi eziningi.
Ngakho-ke, uma ufuna i-ejensi engakusiza ukuthola ibhizinisi lakho lapho kudingeka ukuya khona, kungani ungakhethi uSemalt?